I-Charming Coastal Cottage Free R'trn Airport t'fer - I-Airbnb
I-Charming Coastal Cottage Free R'trn Airport t'fer
Saint Philip, i-Antigua ne-Barbuda
Ukubuyela esikhumulweni sezindiza noma esikhumulweni sezindiza kuphela*
I-Charm Coastal Cottage enokubukwa okumangalisayo kolwandle endaweni ethule. Ikotishi liqokwe ngokucophelela nazo zonke izinsiza zokuqinisekisa ukuthi unokuhlala okujabulisayo. Ifaka umatilasi weqoqo lehhotela le-Serta onethezeke kakhulu nesipholile ukuze ukhululeke.
Leli kotishi eliwubukhazikhazi lihlala ezisekelweni ezinikeza ukubukwa okumangalisayo, okungaphazamiseki kwe-Willoughby Bay enhle, isikhungo sokuvuselela kabusha se-stars Crossroads Centre kanye nemiphakathi ezungezile. Ngezinsuku ezicacile, uzobuka iziqhingi zaseGuadeloupe naseMontserrat ukude. Ukusuka lapho ungena endaweni yokungena yangasese ngengadi yasezindaweni ezishisayo, uqala ukuzwa ubuhle be-"Casa Coastale". Isendaweni ehlala abantulayo e-Willoughby Bay, e-St. Philips, ikotishi libonisa umqondo ovulekile/ukuphila ngaphandle okuyinsakavukela empilweni yesiqhingi. Indawo yokuhlala ihlanganisa ikhishi eligcwele ngokugcwele lapho ungashaya khona ukudla ngamakhambi avela engadini yemifino ephilayo noma ujabulele ikhofi, itiye noma ukudla okulula okulula; ideski lekhompyutha uma ukhetha ukubamba ezokuxhumana ……(kodwa kungani ungakwenza), kanye neqoqo lehhotela le-Serta umbhede olingana nendlovukazi enamalambu amahle, aphambili. Lo mbhede onethezeke kakhulu umi ngomumo ukukuvusa osukwini lwakho olusebenzayo noma olungasebenzi kangako engxenyeni yethu yepharadesi.
Indlu yokugezela ivulekile, ineshawa enosayizi omuhle enekhanda leshawa lemvula, eliqedelwe ngamatshe olwandle. Ikotishi lifaka iwasha nesomisi, ukuze kube lula kuwe. I-lanai enkulu yangaphandle ilungele ukudlela i-al fresco, ukugeza ilanga, ukuhlala ku-hummock noma ukujabulela nje ukubuka okumangalisayo kolwandle emini noma ebusuku. Ikotishi lipholiswa ngokwemvelo yimimoya ekhona, kodwa futhi line-air conditioned ukuze uthole ukunethezeka kwakho okwengeziwe. Wonke amawindi ahlolwe ukuze uthole ukunethezeka kwakho.
Siyaziqhenya ngokucabanga ngezinto ezincane, ukuze sikwenze uzizwe usekhaya ngenkathi usahlala nathi....kusukela ezinsizakalweni ezithembekile, ezisheshayo ze-inthanethi endlini encane kanye nedivayisi ye-inthanethi yeselula esetshenziswayo uma usohambeni.
I-Casa Coastale ikude nakho konke. Kuthule du emini nasebusuku. Ungawezwa amagagasi eshaya ngokuqhubekayo phezu kwezixhobo ze-Willoughby Bay kanye nemisindo enokuthula yemisindo yemvelo ebusuku.
Ngiyakujabulela ukuhlangana nezivakashi zami nokuxhumana nazo noma ukuzinika indawo yazo....noma yikuphi okuthandwa yizivakashi zami. Nokho ngihlala ngikhona ukuze ngisize. Uma kukhona engingakwenza ukuze ngenze okuhlangenwe nakho kwakho kujabulise kakhudlwana, ngicela ungangabazi ukungazisa.
Ngiyakujabulela ukuhlangana nezivakashi zami nokuxhumana nazo noma ukuzinika indawo yazo....noma yikuphi okuthandwa yizivakashi zami. Nokho ngihlala ngikhona ukuze ngisize. Uma kuk…